Hesekiel 47 | Intanɛt So Bible| Wiase Foforɔ Nkyerɛaseɛ
47 Afei ɔde me baa Fie no kwan ano,+ na mihui sɛ nsu+ bi resen fi Fie no apongua ase kɔ apuei fam, efisɛ na Fie no anim kyerɛ apuei fam.+ Na nsu no sen fii ase; efi Fie no nifa so, afɔremuka no anafo. 2 Ɛnna ɔde me faa ɔpon+ a ɛda atifi no kwan so, na ɔde me nwonwan kɔfaa ɔkwan a ɛda akyi no so baa adiwo pon a ani kyerɛ apuei+ fam no ano, na mihui sɛ nsu+ resen fi nifa so. 3 Na ɔbarima no faa susuhama+ kuraa ne nsam de n’ani kyerɛɛ apuei fam, na osusuw basafa apem. Na ɔma mefaa nsu no mu, na ɛdedaa me nankɔn. 4 Ɔsan susuw apem, na ɔma mefaa nsu no mu, na ɛdedaa me kotodwe. Afei osusuw apem bio, na ɔma mefaa mu, na ɛdedaa m’asen mu. 5 Na ɔsan susuw apem, na mantumi amfa mu efisɛ na ayiri adan asubɔnten. Na ɛnyɛ nsu a obi betumi afa mu, gye sɛ ɔboro. 6 Afei obisaa me sɛ: “Onipa ba, woahu?” Na ɔma mesan baa asubɔnten no ano. 7 Mesan bae no, mihui sɛ nnua pii wɔ asubɔnten no ho, benkum ne nifa.+ 8 Na ɔka kyerɛɛ me sɛ: “Nsu yi resen akɔ apuei fam akɔfa Araba,+ na ɛbɛkɔ akɔbɔ po mu.+ Ɛbɛsen akɔ po mu+ na asa emu nsu yare. 9 Na baabiara a asubɔnten a abu abɔ ho yi bɛsen akɔ no, ɔkra teasefo biara a ɛka ne ho+ no benya nkwa. Na emu nam bɛdɔɔso, efisɛ nsu no bɛkɔ hɔ akɔsa ɛpo nsu no yare+ na biribiara asan anya nkwa bio, nea asubɔnten no kɔ biara. 10 “Mpataayifo begyinagyina ho afi En-Gedi+ akɔpem En-Eglaim, na wɔbɛhata wɔn asau wɔ hɔ. Na mpataa ahorow nyinaa bi bɛyɛ manyamanya wom te sɛ mpataa a ɛwɔ Po Kɛse+ no mu no. 11 “Na ɛho awora ne atɛkyɛ de, wɔrensa no yare.+ Ɛbɛyɛ nkyenenkyene.+ 12 “Nnua a wodi nyinaa bi befifi wɔ asubɔnten no ho, benkum ne nifa.+ Na n’ahaban rempo,+ na ɛso aba rensa.+ Ɛbɛsow aba foforo ɔsram biara, efisɛ nsu a egugu so no fi kronkronbea+ hɔ pɛɛ. Na wobedi so aba de n’ahaban asa yare.”+ 13 Nea Awurade Tumfoɔ Yehowa aka ni: “Eyi ne asase a mobɛkyɛ ama Israel mmusuakuw dumien no sɛ wɔn agyapade, na emu abien bɛyɛ Yosef dea.+ 14 Monkyɛ asase no pɛpɛɛpɛ mma obiara nnya ne de, efisɛ asase yi na memaa me nsa so kaa ntam+ sɛ mede bɛma mo agyanom;+ na asase yi bɛyɛ mo agyapade.+ 15 “Asase no hye a ɛda atifi fam ni: Efi Po Kɛse no ho kɔfa Hetlon+ ba Sedad,+ 16 ne Hamat+ ne Berota+ ne Sibraim a ɛda Damasko+ ne Hamat ahye ntam; ne Haser-Hatikon a ɛkɔ Hauran+ ɔhye so no. 17 Na ɔhye no fi po no ho kɔfa Hasar-Enon+ a ɛwɔ Damasko hye so wɔ atifi fam, na ekodu Hamat hye so.+ Eyi ne atifi fam ɔhye no. 18 “Na apuei fam ɔhye no da Hauran+ ne Damasko+ ntam, na ɛkɔfa Yordan+ ho wɔ Gilead+ ne Israel asase no ntam. Munsusuw mfi ɔhye no so nkɔ apuei fam po no ho. Eyi ne apuei fam ɔhye no. 19 “Na anafo fam ɔhye no fi Tamar+ kɔ Meribat-Kades+ nsu ho, fi subon+ no ho kɔ Po Kɛse no ho. Eyi ne anafo fam ɔhye a ɛwɔ Negeb no. 20 “Na atɔe fam ɔhye no ne Po Kɛse no, fi ɔhye no so tẽẽ kɔ Hamat+ ɔhye so. Eyi ne atɔe fam ɔhye no.” 21 “Monkyɛ asase yi mma Israel mmusuakuw dumien no. 22 Monkyɛ asase no mfa,+ na momfa bi mma ahɔho a wɔabɛsoɛ mo mu+ awowo mma no. Na mummu wɔn sɛ Israel man mma. Na wɔne mo nyinaa nkyɛ agyapade wɔ Israel mmusua mu.+ 23 Abusua a ɔhɔho no abɛsoɛ mu no, ɛhɔ na momma no agyapade,” Awurade Tumfoɔ Yehowa asɛm ni.